Momba anay - Carl Henry Global
Carl-Henry-GlobalNandany ny androm-piainako hatrizay hatramin'ny naha-12 ahy dia nanangana orin'asa & nahazoana vola ho mpandraharaha fa tsy mpiasa. Hatramin'ny faha 1st tamin'ny Jolay 1978 dia niasa mafy aho mba hitoerana hoe “tsy an'asa”.
Tsy nanakana ny fianarana ireo fomba amam-panao farany indrindra sy ny fanadihadiana ny orinasa samihafa aho, mba hahitako ny fahombiazan'ny fitantanam-bola, amin'ny fombako manokana.
Tamin'ny isa farany, niasa tamin'ny orinasa 39 aho
Ny orinasanay voalohany dia antsoina Carl Henry Global sa. Manana sehatra maro sy orinasa maro miasa amin'ny aterineto manerana izao tontolo izao izahay, manana orinasa miorina any amin'ny firenena maromaro.
Ny tena fototry ny raharaham-barotra ao amin'ny orinasa dia mifamahofaho eo ambanin'ny lohan'ny 5; Finance, Varotra sy hofa fananana mifaka (Property), Internet (Digital Marketing), Corporate ary Lifestyle. Ny fiainana sy ny raharaham-barotra rehetra dia azo zakaina ara-barotra eo ambanin'ny lohateny 5.
Ny tanjontsika dia ny hamorona fikambanana miaro tena tanteraka izay manana ny fahaiza-manao sy ny loharanom-bola rehetra ilaina hanombohana, fanohanana, fitantanana ary fanomezana varotra an-tserasera ho an'ny karazam-barotra na tetikasa, indrindra raha manana potipotika maimaim-poana amin'ny Internet .
Amin'ny maha-modely anay dia nanapa-kevitra izahay
mba hanampy ny hafa Fampiofanana sy asa ara-barotra
Tapaka ny evanjelika rehetra ny fientanentanana diso ary atsipy ny fampahalalana ilainao, ho amin'ny dingana haingana izay azonao alaina "izao ankehitriny" handraisana ny fanovana eo amin'ny fiainanao handrisika anao amin'ny tena toetry ny fiainana sy ny fomba fiainanao. faly faly.
Ny fototry izany rehetra izany dia ny fahafahana mahazo vola amin'ny fomba manohana ny karazana fomba fiaina tianao; voalaza fa raha afaka manao ny filanao na ny fialam-boly ho loharanon'ny karamanao ianao dia tsy “hiasa” amin'ny andro hafa!